Guddiga amniga qaranka oo xalay shir xasaasi ah ku yeeshay Muqdisho
Guddiga amniga qaranka ayaa xalay Magaalada Muqdisho waxa uu ku yeeshay kulan balaran, kaasi oo ay uga hadalayeen xoojinta ammaanka guud ee dalka, iyadoo kulankaasi looga hadlaayay arrimo badan oo dhanka amniga ah.
Kulankaasi uu yeeshay Gudiga Aminiga Qaranka Soomaaliyeed ayaa waxaa shirgudoominaayay madaxweynaha Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed , waxaana goob joog ka ahaa hey’adda amniga qaranka iyo taliyayaasha ciidammada Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta, Boosta iyo Isgaarsiinta C/qaadir Xuseen Maxamed Jaahweyn oo kulanka guddiga amniga qaranka ayaa sheegay in kulankaasi looga hadlay qodobbo badan oo ay ugu waa weyn yihiin xoojinta iyo adkaynta amniga dalka.
Wasiirka Warfaafinta waxa uu sheegay in guddiga ay ka dooddeen sida ugu wanaagsan ee xilligani loo suggi karo ammaanka caasimadda, isla markaana ciidammada amniga loogu dhiirri gallin lahaa sidii ay qayb libaax leh uga qaadan lahaayeen sugidda amniga.
Gudiga amniga ayaa isla gartay in si adag loo xoojiyo ammaanka xarumaha ay ka dhici doonaan Ansixinta Dastuurka dalka, si aysan arrimahaasi u qal qal gallin Kooxaha Al-Shabaab iyo Al-Qaacidda.
Dhinaca kale Wasiirku waxa uu sheegay in deegaannada laga xorreeyay Al-Qaacidda la geyn doono ciidammo gaar ah oo ammaanka deegaannadaasi la wareegga, isagoo sheegay in hey’addaha amniga qaranka amar lagu siiyay in ay ballaariyaan la dagaallanka shaqsiyaadka waxyeelleenaya ammaanka Magaalada Muqdisho.